ရာသီခွင်တွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီဖွားဖြစ်တဲ့ ဓနုရာသီဖွားအကြောင်း - Real Gaming
ရာသီခွင်တွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီဖွားဖြစ်တဲ့ ဓနုရာသီဖွားအကြောင်း
ဓနုရာသီဖွားတွေဟာ တစ်နှစ်တာ ရာသီခွင်တွေထဲမှာ အထူးခြားဆုံးနဲ့ အကောင်းဆုံး ရာသီဖွားတွေလို့ ပြောလို့ရပါတယ် ….. ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုကောင်းတဲ့ အချက်တွေ အားလုံးကို ပိုင်ဆိုင်ထားလို့ပါ …. ။
( ၁ ) သင်ယူနိုင်စွမ်း အရမ်းကောင်းတယ်
ဓနုရာသီဖွားတွေဟာ သဘာဝအရ ကိုယ်တိုင်သင်ယူနိုင်စွမ်း ကောင်းပြီး အရာရာကို သင်လွယ် တတ်လွယ် ကြပါတယ် … ။ သူတို့ သိပြီး တတ်ပြီးသား အရာတွေကိုလည်း အလဟဿ အဖြစ်မခံဘဲ ကောင်းကောင်း အသုံးချတတ်တဲ့ သူတွေပါ …. ။
( ၂ ) မျှဝေတတ်တယ်
သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိသားစုတွေ လိုအပ်တာရှိရင် ဖြည့်ဆည်းပေးတတ်ပြီး အကူအညီလိုရင် ပေးဖို့ အသင့်ရှိနေတဲ့ သူပါပဲ … ။
( ၃ ) စစ်မှန်တယ်
သူတို့မမှားရင် လုံးဝ မတောင်းပန်တတ်သလို၊ သူတို့တောင်းပန်ပြီ ဆိုရင်လည်း တကယ်စိတ်ထဲက ပါလို့ တောင်းပန်တာပါ …. ။
( ၄ ) စွန့်စားတတ်တယ်၊ ပျော်ပျော်နေတတ်တယ်
ဓနုရာသီဖွားတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်ပြီဆိုရင် သူတို့နဲ့အတူ ခရီးတွေသွားဖြစ်မယ်၊ သူတို့တွေက ပျော်ပျော်နေတတ်တာကြောင့် သင်ပါ အမြဲပျော်ရပါလိမ့်မယ် …. ။ စွန့်စားတတ်တဲ့ သတ္တိကတော့ ဓနုရာသီဖွားတွေကို ဘယ်သူမှကို မမီတာပါ … ။
( ၅ ) ပွင့်လင်းတယ်
စိတ်ထဲရှိတာကို အရှိအတိုင်း ပြောတတ်တယ်၊ မြိုသိပ် မထားတတ်ဘူး။ ဖုံးကွယ် ဟန်ဆောင်တတ်တဲ့ သူမျိုး မဟုတ်လို့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ နားလည်ရခက်တဲ့ သူမျိုးတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး … ။
( ၆ ) ဟာသဉာဏ်ရွှင်တယ်
အမြဲတမ်း ပျော်ပျော်နေတတ်ပြီး ဟာသဉာဏ်ရွှင်တဲ့ သူတို့တွေကြောင့် သူတို့ဘေးက လူတွေလည်း အမြဲပျော်နေရတယ် … ။
( ၇ ) ရင်းရင်းနှီးနှီးနေတတ်တယ်
လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့တွေ့ချင်းမှာ စိမ်းနေပေမယ့် ခင်ပြီဆိုရင်လည်း စိတ်ရောလူရော နှစ်ပြီး ပေါင်းတတ်တဲ့ သူလေးတွေပါ …. ။
( ၈ ) သူငယ်ချင်းအတွက် အမြဲအသင့်ရှိတယ်
သူငယ်ချင်းတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေရင် ကူညီဖို့အသင့်၊ ဝမ်းနည်းနေရင် ဖေးမဖို့အသင့်၊ သူငယ်ချင်းကို ရန်စတဲ့သူတွေကို ပြန်တိုက်ခိုက်ဖို့အသင့်… အဲ့ဒီလိုမျိုး တကယ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ဆို အမြဲအသင့်ဖြစ်နေတာပါ … ။
( ၉ ) သစ္စာရှိတယ်
ကိုယ်ခင်တဲ့၊ ချစ်တဲ့သူအပေါ် အမြဲတမ်း သစ္စာရှိတယ်၊ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဘယ်တော့မှ မလုပ်တဲ့ ဓနုရာသီဖွားတွေပေါ့ … ။
( ၁၀ ) ဒရာမာတွေ လုံးဝမကြိုက်ဘူး
သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ဘဝကို ရဲရဲရင်ဆိုင်တယ်၊ အခက်အခဲတွေကိုလည်း မညီးညူတတ်ဘူး။ နေရာတကာ ပြိုလဲကြေကွဲ ခံစားနေတာမျိုး မရှိဘူး၊ သူတို့ဘေးက လူတွေကိုလည်း ဒရာမာချိုးတာ၊ ဇာတ်နာတာတွေ လုပ်ရင် လုံးဝမကြိုက်ဘူး … ။
( ၁၁ ) စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သန်မာတယ်
အရာရာကို ရဲရဲရင်ဆိုင်တတ်တယ်၊ အခက်အခဲတွေ တွေ့ရင် ရှောင်မပြေးဘူး ၊ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သန်မာတဲ့ သူလေးတွေပေါ့ … ။
( ၁၂ ) လမ်းမှားနေကြောင်းပြောပြတယ်
သူတို့ချစ်တဲ့သူတွေ၊ ခင်တဲ့သူတွေကို ကောင်းစေချင်တဲ့ စေတနာမျိုးပဲ ရှိတာကြောင့် မှားနေတာတွေ့ရင် ထောက်ပြတတ်တယ်၊ လမ်းမှန်ရောက်အောင် တတ်နိုင်သလောက် ကူညီပေးတတ်ကြတယ် …. ။
( ၁၃ ) ရိုးသားတယ်
ကလိမ်ကကျစ် လုပ်ရပ်တွေကို ဘယ်တော့မှ မလုပ်ဘူး၊ ရိုးသားမှုကို တန်ဖိုးထားတယ် …. ။ လိမ်ညာတာ၊ မာယာများတာတွေကိုလည်း ဘယ်တော့မှ လုပ်မှာမဟုတ်ဘူး … ။
( ၁၄ ) မနာလိုစိတ်မရှိဘူး
တခြားသူတွေ ကျရှုံးနေတာကိုလည်း ဝမ်းမသာတတ်သလို၊ အောင်မြင်နေရင်လည်း မနာလိုစိတ် မဖြစ်တတ်ဘူး။ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်ကျေနပ်တဲ့စိတ်ရှိတယ်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမှာပဲ အာရုံစိုက်လေ့ရှိတာကြောင့် သူများတွေအပေါ် မနာလိုစိတ် မရှိတဲ့ သူတွေပါ …. .။
ရာသီခှငျတှထေဲမှာ အထူးခွားဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံး ရာသီဖှားဖွဈတဲ့ ဓနုရာသီဖှားအကွောငျး
ဓနုရာသီဖှားတှဟော တဈနှဈတာ ရာသီခှငျတှထေဲမှာ အထူးခွားဆုံးနဲ့ အကောငျးဆုံး ရာသီဖှားတှလေို့ ပွောလို့ရပါတယျ ….. ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုကောငျးတဲ့ အခကျြတှေ အားလုံးကို ပိုငျဆိုငျထားလို့ပါ …. ။
( ၁ ) သငျယူနိုငျစှမျး အရမျးကောငျးတယျ
ဓနုရာသီဖှားတှဟော သဘာဝအရ ကိုယျတိုငျသငျယူနိုငျစှမျး ကောငျးပွီး အရာရာကို သငျလှယျ တတျလှယျ ကွပါတယျ … ။ သူတို့ သိပွီး တတျပွီးသား အရာတှကေိုလညျး အလဟဿ အဖွဈမခံဘဲ ကောငျးကောငျး အသုံးခတြတျတဲ့ သူတှပေါ …. ။
( ၂ ) မြှဝတေတျတယျ
သူငယျခငျြးတှေ၊ မိသားစုတှေ လိုအပျတာရှိရငျ ဖွညျ့ဆညျးပေးတတျပွီး အကူအညီလိုရငျ ပေးဖို့ အသငျ့ရှိနတေဲ့ သူပါပဲ … ။
( ၃ ) စဈမှနျတယျ
သူတို့မမှားရငျ လုံးဝ မတောငျးပနျတတျသလို၊ သူတို့တောငျးပနျပွီ ဆိုရငျလညျး တကယျစိတျထဲက ပါလို့ တောငျးပနျတာပါ …. ။
( ၄ ) စှနျ့စားတတျတယျ၊ ပြျောပြျောနတေတျတယျ
ဓနုရာသီဖှားတှနေဲ့ သူငယျခငျြးဖွဈပွီဆိုရငျ သူတို့နဲ့အတူ ခရီးတှသှေားဖွဈမယျ၊ သူတို့တှကေ ပြျောပြျောနတေတျတာကွောငျ့ သငျပါ အမွဲပြျောရပါလိမျ့မယျ …. ။ စှနျ့စားတတျတဲ့ သတ်တိကတော့ ဓနုရာသီဖှားတှကေို ဘယျသူမှကို မမီတာပါ … ။
( ၅ ) ပှငျ့လငျးတယျ
စိတျထဲရှိတာကို အရှိအတိုငျး ပွောတတျတယျ၊ မွိုသိပျ မထားတတျဘူး။ ဖုံးကှယျ ဟနျဆောငျတတျတဲ့ သူမြိုး မဟုတျလို့ လြှို့ဝှကျခကျြတှနေဲ့ နားလညျရခကျတဲ့ သူမြိုးတှေ မဟုတျကွပါဘူး … ။
( ၆ ) ဟာသဉာဏျရှငျတယျ
အမွဲတမျး ပြျောပြျောနတေတျပွီး ဟာသဉာဏျရှငျတဲ့ သူတို့တှကွေောငျ့ သူတို့ဘေးက လူတှလေညျး အမွဲပြျောနရေတယျ … ။
( ၇ ) ရငျးရငျးနှီးနှီးနတေတျတယျ
လူတဈယောကျကို စတှတှေ့ခေ့ငျြးမှာ စိမျးနပေမေယျ့ ခငျပွီဆိုရငျလညျး စိတျရောလူရော နှဈပွီး ပေါငျးတတျတဲ့ သူလေးတှပေါ …. ။
( ၈ ) သူငယျခငျြးအတှကျ အမွဲအသငျ့ရှိတယျ
သူငယျခငျြးတှေ အခကျအခဲဖွဈနရေငျ ကူညီဖို့အသငျ့၊ ဝမျးနညျးနရေငျ ဖေးမဖို့အသငျ့၊ သူငယျခငျြးကို ရနျစတဲ့သူတှကေို ပွနျတိုကျခိုကျဖို့အသငျ့… အဲ့ဒီလိုမြိုး တကယျခငျတဲ့ သူငယျခငျြးတှေ အတှကျဆို အမွဲအသငျ့ဖွဈနတောပါ … ။
( ၉ ) သစ်စာရှိတယျ
ကိုယျခငျတဲ့၊ ခဈြတဲ့သူအပျေါ အမွဲတမျး သစ်စာရှိတယျ၊ နောကျကြောဓားနဲ့ထိုးတဲ့ လုပျရပျတှေ ဘယျတော့မှ မလုပျတဲ့ ဓနုရာသီဖှားတှပေေါ့ … ။
( ၁၀ ) ဒရာမာတှေ လုံးဝမကွိုကျဘူး
သူတို့ကိုယျတိုငျလညျး ဘဝကို ရဲရဲရငျဆိုငျတယျ၊ အခကျအခဲတှကေိုလညျး မညီးညူတတျဘူး။ နရောတကာ ပွိုလဲကွကှေဲ ခံစားနတောမြိုး မရှိဘူး၊ သူတို့ဘေးက လူတှကေိုလညျး ဒရာမာခြိုးတာ၊ ဇာတျနာတာတှေ လုပျရငျ လုံးဝမကွိုကျဘူး … ။
( ၁၁ ) စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျသနျမာတယျ
အရာရာကို ရဲရဲရငျဆိုငျတတျတယျ၊ အခကျအခဲတှေ တှရေ့ငျ ရှောငျမပွေးဘူး ၊ စိတျဓာတျကွံ့ခိုငျသနျမာတဲ့ သူလေးတှပေေါ့ … ။
( ၁၂ ) လမျးမှားနကွေောငျးပွောပွတယျ
သူတို့ခဈြတဲ့သူတှေ၊ ခငျတဲ့သူတှကေို ကောငျးစခေငျြတဲ့ စတေနာမြိုးပဲ ရှိတာကွောငျ့ မှားနတောတှရေ့ငျ ထောကျပွတတျတယျ၊ လမျးမှနျရောကျအောငျ တတျနိုငျသလောကျ ကူညီပေးတတျကွတယျ …. ။
( ၁၃ ) ရိုးသားတယျ
ကလိမျကကဈြ လုပျရပျတှကေို ဘယျတော့မှ မလုပျဘူး၊ ရိုးသားမှုကို တနျဖိုးထားတယျ …. ။ လိမျညာတာ၊ မာယာမြားတာတှကေိုလညျး ဘယျတော့မှ လုပျမှာမဟုတျဘူး … ။
( ၁၄ ) မနာလိုစိတျမရှိဘူး
တခွားသူတှေ ကရြှုံးနတောကိုလညျး ဝမျးမသာတတျသလို၊ အောငျမွငျနရေငျလညျး မနာလိုစိတျ မဖွဈတတျဘူး။ ကိုယျ့ဘဝကိုယျကနြေပျတဲ့စိတျရှိတယျ၊ ကိုယျ့ကိုယျကိုမှာပဲ အာရုံစိုကျလရှေိ့တာကွောငျ့ သူမြားတှအေပျေါ မနာလိုစိတျ မရှိတဲ့ သူတှပေါ …. .။